နယူးဇီလန်မှာ နိုင်ငံတော် အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင္း နိုင်ငံတကာသတင်း နယူးဇီလန်မှာ နိုင်ငံတော် အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာ
New Zealand's Prime Minister Jacinda Ardern speaks to the media duringapress conference one day before the country goes on lockdown to stop any progress of the COVID-19 coronavirus, at Parliament in Wellington on March 24, 2020. (Photo by Marty MELVILLE / AFP)
နယူးဇီလန်မှာ နိုင်ငံတော် အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာ
နယူးဇီလန် ဝန်ကြီးချုပ် ဂျက်ဆင်ဒါ အာဒန်းက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ပိတ်ချပစ်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကြိုတင်ပြီး ဒီနေ့ မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံကို အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
နယူးဇီလန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု ၂၀၅ ခု အထိ ရှိလာတဲ့အတွက် အစိုးရက လူတိုင်း သီးသန့်စီနေကြဖို့ ညွှန်ကြားထားပြီး အရမ်းအရေးမကြီးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ၊ ကျောင်းတွေနဲ့ ရုံးတွေကို တစ်လကြာ ပိတ်ခိုင်းထားပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နေမှုတွေ ရပ်သွားအောင် ကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့ ဒီည သန်းခေါင်က စတင်ပြီး သီတင်းလေးပတ်ကြာ ပိတ်ထားမယ်လို့ ဝန်ကြီးချုပ် အာဒန်းက ပါလီမန်ကို ပြောပါတယ်။ နယူးဇီလန်မှာ ဒီနေ့ COVID-19 ဖြစ်ပွားမှု အသစ် ၅၀ ထပ်မံတွေ့ရှိရပါတယ်။
New Zealand’s Prime Minister Jacinda Ardern speaks to the media duringapress conference one day before the country goes on lockdown to stop any progress of the COVID-19 coronavirus, at Parliament in Wellington on March 24, 2020. (Photo by Marty MELVILLE / AFP)
Previous articleတက္ကသိုလ် ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို နေအိမ်မှ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ပေးဖို့ တောင်းဆို
Next articleပြည်တွင်း လိဂ်ပွဲအားလုံး မတ်လ ၂၄ ရက်ကစပြီး ရပ်နားပြီ